.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Blogger Template
Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Blogger Template
ဒီ Blogger Template လေးကို Flash Song တွေ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့
ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းကိုလည်း လှပသေသပ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။
Flash Song တွေ တင်ဖို့ Table ဒီဇိုင်း ၂ ခုကိုလည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်နော်။ မူရင်း Template ကို ကြည့်ချင်ရင်တော့
ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြိုက်လို့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Template ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
Download: The Best Template For Flash Song Creators
Template ကို ကိုယ့် Blog မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် Design >> Template >> Backup/Restore ကို နှိပ်ပြီး လက်ရှိသုံးနေတဲ့
Template ကို အရင် ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သိမ်းထားပါ။ ပြီးရင် သူ့အောက်က Browse ကို နှိပ်ပြီး အနော်တင်ပေးထားတဲ့
.rar ဖိုင်ထဲက Template ကို ရွေးပြီးတော့ Upload ကို နှိပ်ပါ။ ခဏစောင့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေး
ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ Flash သီချင်းတွေ တင်ဖို့က Table ကုတ်တွေကို ပို့စ်တင်တဲ့အခါ HTML ကို နှိပ်ပြီး ထည့်ပါ။
ဒီ Template လေးကို အားလုံးပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲနဲ့ရော
နောက်နေ့တွေပါ ၃ ရက်လောက် အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ပေးထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် Template ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြန်ပြီး
ပြင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကုတ်တွေထဲက ကျွန်တော့်နာမည်ကိုတော့
မဖျက်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ တစ်ခြားဟာတွေကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း........။
Posted by Thurainlin at 06:16
Labels: Blog, Template, Wallpaper